sawehlor: gtalk တွင် zaw gyi font မပေါ်ခြင်း ပြဿနာအဖြစ်အများဆုံးက IE က
gtalk တွင် zaw gyi font မပေါ်ခြင်း ပြဿနာအဖြစ်အများဆုံးက IE က
yu yu; nyima computer ka dell amyoo asar(2010-japan version)par...athi ama 1 yout ka myanmar font ko read loe ya aung. write loe ya aung lote pay par tal. but, myanmar font ko read loe tot ya tal... write loe ma ya buu phyit nay tal... ama ka le, bar phyit loe le ma thi buu... ma lote tat tot buu loe pyaw par tal.... ako ku nyi loe ya mal so yin.... pyaw pya pay par shin. kyay zuu tin par tal..
အစ်ကို့အထင်တော့ ညီမက internet explorer ကို သွားသုံးနေတယ်ထင်တယ်. ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ အချက်တွေကိုသာ ပြင်လိုက်ပါ . ညီမ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့ ပြဿနာအဖြစ်အများဆုံးကတော့ IE လို့ခေါ်တဲ့ internet explorer ကနေ Times New Roman (or) တစ်ခြား font တစ်ခုခုကို ရွေးထားပြီး browser ကို Default ယူထားလို့ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ. အဲ့ဒီ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Mozilla Firefox ကို Default browser အဖြစ် ပြန်ယူလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ. အဲ့တော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ Firefox ကို တင်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းက Mozilla Firefox browser ကို default ထားမှာလားမေးတုန်းက default မထားခဲ့လို့လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်. တစ်ခါတစ်ရံ default ထားထားတာတောင်မှ IE နဲ့ gtalk နဲ့ လာငြိတတ်ပါတယ်. ကဲလုပ်ရမှာလေးကို ပြောပြပေးပါ့မယ်.
သေချာသွားအောင်လို့ ၃ နေရာပြင်ပါမယ်.
၁။ Internet explorer (IE) ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
Tools ထဲက Internet options ဆိုတာကို ရွေးပေးလိုက်ပါ.
ပြီးတာနဲ့ အောက်ဆုံးက Appearance ရဲ့အောက်က Colors ၊ Languages ၊ Fonts ၊ Accessibility ဆိုတဲ့အထဲက Fonts ဆိုတဲ့ အကွက်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Webpage font: အကွက်မှာ အောက်ဆုံးအထိ ဆွဲချလိုက်ပြီး Zawgyi-One ဆိုတာကို တွေ့အောင်ရှာပြီး ရွေးပေးလိုက်ပါ.
ပြီးရင်တော့ OK ပေါ့.
၂။ Mozilla Firefox ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Menu bar မှာရှိတဲ့ Tools >> Options ကိုသွားလိုက်ပါ.
Options box ထဲက Content ကိုရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပြီး Default font မှာ Zawgyi-One ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၃။ ဒါကတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်ပါ။ Gtalk ကိုဖွင့်ပါ။
ထိပ်ဆုံးက Settings ကို နှိပ်လိုက်ပါ. ပြီးရင် ညာဖက်က အလယ်လောက်မှာရှိတဲ့ Change Font ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
အဲ့မှာလည်းပဲ Zawgyi-One ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
ကဲ ဒီသုံးခုပြီးရင်တော့ အားလုံးအိုကေသွားပါပြီ . အဆင်မပြေတာများရှိရင် ကွန်မန့်ရေးပေးနိုင်ပါတယ်. အဓိကကတော့ IE မှာ Zawgyi-One font ရွေးပေးဖို့ပါပဲ. အများဆုံးအဖြစ်များတာက IE နဲ့ ငြိတတ်တာများပါတယ်. အားလုံးပဲ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. zawgyi font နဲ့ keyboard ကိုတော့ ကျွန်တော့်ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်အခြမ်းမှာ တင်ထားပေးပါတယ်. မသိတဲ့သူများ ကိုတင်ထားတဲ့ window က 32 bit လား 64 bit လား အရင်ကြည့်ပါ. 32 bit ဆိုရင် ဒီမှာ Download လုပ်ပါ. 64 bit ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ Download လုပ်ပါ။ တစ်ချို့ ကိုတင်ထားတဲ့ window က 32 bit လား 64 bit လား မခွဲတတ်တဲ့သူများကတော့ Desktop က My computer (or) Computer ကို right click ထောက်ပြီး properties ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့မှာ System ဆိုတဲ့စာတမ်းအောက်မှာ system type ဆိုတာကို လိုက်ရှာလိုက်ပါ. သူ့ဘေးမှာ 32 bit ဆိုရင် 32 bit operation system လို့ရေးထားမှာဖြစ်ပြီး 64 bit ဆိုရင်တော့ 64 bit operation system လို့ရေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်.
Source : ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
Posted by saw ehlor at 21:32